Site na atụmatụ a, Fitbit chọrọ iji weghachite ọnọdụ mbụ na ahịa n'ahịa wearables | Akụkọ akụrụngwa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a malitere ịme ọkwa na ngwa ahịa ndị nwere ike ịkpụ, ụmụ okorobịa na Fitbit abanyela na ọkwa ahụ, Xiaomi na-esote ya na MiBand 2. Mana na akụkọ ọhụụ nke ọ bụla, anyị nwere ike ịhụ otu Xiaomi aburula onye ndu ahia, mgbe Fitbit agbadatala n'ọnọdụ nke atọ n'okpuru Apple Watch.
Ọ bụ ezie na ngwaọrụ ndị a abụghị naanị ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị ọrụ, ọtụtụ bụ ụlọ ọrụ ndị na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ya. Fitbit, nke na-enye anyị ụdị dị iche iche n'ahịa, na-ata ahụhụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya iji nọgide na-abụ isi ihe ọzọ maka ndị ọrụ, ma enwebeghị ihe ịga nke ọma. Companylọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ụdị ọhụụ ọhụụ zuru ezu iji gboo mkpa ahịa niile.
Otu n'ime isi ihe kpatara ahịa Fitbit abụghị ụdị ya, nke ọ nwere maka ụdị ụtọ na agba niile, mana ọnụahịa. Ọ bụ ezie na Xiaomi MiBand 2 na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ na arụmọrụ maka ihe dị n'okpuru euro 30, ụdị Fitbit kachasị nwere njirimara na ọrụ yiri ya sitere na euro 100.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-ahọrọ enye a ọzọ adịchaghị imecha n'etiti ya wearablesO yiri ka ụmụ nwoke na Fitbit na-aga ụzọ ọzọ. Ihe omuma ohuru a nwere ihe nlebara anya, ihe di nma karie ihe nlere nke Blaze, ya mere o gha achotaghi igodo ndi oru choro, ebe obu na obughi ngwaọrụ nke apuru iji ya eme kwa ubochi ma megharia .
Mana ihe dị mkpa abụghị imewe, mana arụmọrụ. Fitibt ejirila usoro ihe ọkụkụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji tụọ ụda obi. Mana dịka anyị pụrụ ịhụ n'onyonyo ndị ahụ agbapụtala, ụdị ọhụrụ a ga-enwe ọkụ uhie abụọ na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, nke ngwaọrụ ahụ ji eme ya. nwere ike ịlele ọkwa oxygen n'ime ọbara Na mgbakwunye na ịkọwa karịa mgbe ọ na-abịa n'ịchịkwa obi anyị.
Ọ bụrụ na emesiri gosipụta na ihe mmetụta ndị a nwere ike ịlele ọkwa oxygen n'ọbara, Fitbit ga-abụ ụlọ ọrụ izizi wepụtara wearable na ike ndị a, Nke nwere ike weghachite ya n'ọkwá dị elu na ahịa na mpaghara ndị a na-eji ejiji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Site na atụmatụ a, Fitbit chọrọ iji weghachite ọnọdụ mbụ na ahịa n'ahịa ndị na-eyi uwe
Ọ bụrụ na nhazi ikpeazụ dị ka nke dị na foto ahụ, echere m na anyị agaghị enwe ike ịlaghachi azụ, n'ezie, ha kwesịrị ibu ụzọ belata ọnụ ọgụgụ nke smartband na nke abụọ mee otu (ma ọ bụ karịa) smartwatch nke dị ka lelee maka ojiji kwa ụbọchị na ọkwa dị iche iche echefuru n'eleghị anya egwuregwu gị.
Bethesda mara ọkwa Fallout 4 Game nke Afọ mbipụta